Adjustable wrenches - İngilizce - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: adjustable wrenches are used to turn nuts (İngilizce - Birmanca)
အာနိသင်သက်ရောက်မှုကို ကနဦး ဖတ်ရှုနိုင်ရန်နှင့် NCE မှ သတ်မှတ်ထားသော ရောဂါရှိသူ အရေအတွက် အနည်းငယ်တွင် ဘေးကင်းစေခြင်း ရှိမရှိ ဆက်လက် စူးစမ်းရှာဖွေရန် အဆင့် II စမ်းသပ်မှုများကို အသုံးပြုပါသည်။
The statistical methodology is in support ofapolicy approach to widespread disease outbreak, where so-called nonpharmaceutical interventions (NPIs) are used to respond to an emerging pandemic to produce disease suppression.
ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းသည် ပြန့်ပွားလာသော ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ချဉ်းကပ်ရေးမူဝါဒအား ပံ့ပိုးပေးကာ၊ ရောဂါဖိနှိပ်မှုကိုထုတ်လုပ်ပေးရန်အတွက် ထွက်ပေါ်လာသောကပ်ရောဂါကိုတုံ့ပြန်ရန် ဆေးဖော်စပ်မှုနှင့်မဆိုင်သော ကြားဝင်မှုများ (NPIs) ဟုခေါ်ဆိုသည့်အရာများကို အသုံးပြုထားပါသည်။
Ifapotential risk is detected, the app not only recommends self-quarantine, it also alerts local health officials.Big data analytics on cellphone data, facial recognition technology, mobile phone tracking and artificial intelligence are used to track infected people and people whom they contacted in South Korea, Taiwan and Singapore.
ဖြစ်နိုင်ချေ ဘေးအန္တရာယ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက ၎င်းအက်ပ်သည် မိမိဘာသာ ခွဲနေစောင့်ကြည့်ရန် အကြံပြုရုံ သာမက ဒေသခံ ကျန်းမာရေး အရာရှိများကိုလည်း အသိပေးသည်။ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်နှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့တွင် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူများနှင့် ထိုကူးစက်ခံရသူများနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သူများကို ရှာဖွေရန် ဆဲလ်ဖုန်းပေါ်ရှိ ကြီးမားသော ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ်မှုစနစ်၊ မျက်နှာ သိရှိမှတ်သားသည့် နည်းပညာ၊ မိုင်ဘိုင်းလ်ဖုန်းခြေရာခံခြင်းနှင့် မှတ်ဉာဏ်တုနည်းပညာများ အသုံးပြု၍ ခြေရာခံသည်။
pantomimo (İspanyolca>Hollandaca)ghar se bahar nikal diya (Hintçe>İngilizce)miss gail (İngilizce>Maori)maliit ang sahod ko dito (Tagalogca>İngilizce)onion ka chilka (Hintçe>İngilizce)sözlük (Türkçe>Portekizce)applications (İngilizce>Rusça)penawaran (Endonezce>İngilizce)popeye (İngilizce>Sinhala)afteralong day of work (İngilizce>Tagalogca)nilakbay (Tagalogca>İngilizce)təsəssəngay (Tamashek (Tuareg)>Tagalogca)baza (Lehçe>İngilizce)ok lang yan kaya mo yan (Tagalogca>İngilizce)tienes que enseñarme frances (İspanyolca>İngilizce)semoga allah memberi kelancaran kepada anda (Endonezce>İngilizce)pan holder name (İngilizce>Hintçe)eerlijk (Hollandaca>Fransızca)de nanda (İngilizce>Portekizce)kya matlab hai iska ice chamber air cooler (Hintçe>İngilizce)sanboor meaning in english (İngilizce>Somalice)ginalingan ko pa (Tagalogca>İngilizce)kasingkahulugan ng pluma (Tagalogca>İngilizce)kya app punjabi bol sakte ho (Hintçe>İngilizce)il piano ferie (İtalyanca>İngilizce)